एमालेमा भाँडभैलो, पार्टी विभाजनको दिशातिर ! - NepalDut NepalDut
एमालेमा भाँडभैलो, पार्टी विभाजनको दिशातिर !
अदालतको फैसलापछि टरेको नेकपाको भाँडभैलो सत्तारुढ एमालेमा सुरु भएको छ । शुक्रबार अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकट केन्द्रीय सदस्यको बैठकबाट माधव नेपाल पक्षको जिम्मेवारी खोसे ।
ओलीले महाधिवेशनको मिति तोक्नेदेखि महासचिवबाहेक पदाधिकारीसमेत खारेज गरेका छन् । उनले माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा आएका रामबहादुर थापा बादललाई गण्डकी र लेखराज भट्टराई सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज नियुक्त गरेका छन् ।
यी दुवै ठाउँमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार निकट नेता इन्चार्ज थिए । अध्यक्ष ओलीले माओवादीका २३ नेतालाई केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीसमेत दिएका छन् ।
जानकारीबिना र विधानविपरीत ओलीले निर्णय गरेको भन्दै नेपाल खनाल पक्षले यसलाई नमान्ने जनाएको छ । शुक्रबारै साँझ भएको यो पक्षको स्थायी समिति बैठकले देशैभर समानान्तर कमिटी बनाउने र शनिबार केन्द्रीय कमिटी बैठक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल पक्षले चैत पहिलो साता केन्द्रीय स्तरको भेला गर्ने भएको छ । यसरी ओली पक्ष र नेपाल पक्षका २ फरक फरक कमिटी निर्माण हुने भएपछि एमाले विभाजनको दिशामा जाने देखिएको छ । नेपाल निकट नेताहरुले ओलीले विभाजन गर्ने नियतले यसो गरेको दाबी गरेका छन् ।
फागुन २३ मा अदालतको निर्णय आएलगत्तै ब्यूतिएको एमालेमा नेपाल समूहले अब सहन नसक्ने मनस्थितिमा पुगेको छ । पार्टीको विधानमा रहेको ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’को व्यवस्था प्रयोग गरेर ओलीले प्रदेशका इन्चार्ज परिवर्तन, नयाँ नियुक्त गरेका हुन् ।
ओली समूहको बैठकले आगामी मंसिर २ देखि ६ गतेसम्म दसौं महाधिवेशन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । अब ७ चैतमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुने आजै छानिएका पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
यता, नेपाल समूहको बैठकले शुक्रबारका निर्णयको सामना गरेर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ । एमाले नेता रघुजी पन्तले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीलाई विभाजनको दिशातिर लैजानु भयो।’ ओलीको यो कार्यशैलीले सँगै बस्ने अवस्था नरहेको नेपाल निकट नेताहरुले बताएका छन् ।